Jock Itch (ပေါင်ခြံမှိုစွဲရောဂါ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Jock Itch (ပေါင်ခြံမှိုစွဲရောဂါ)
Jock Itch (ပေါင်ခြံမှိုစွဲရောဂါ) ကဘာလဲ။
Jock itch သည် အဖြစ်များသော dermatophhytes ဟုခေါ်သော မှိုစွဲခြင်း တစ်မျိုးကြောင့် ဖြစ်သော ပေါင်ခြံနေရာတွင် ယားယံခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုမှိုစွဲခြင်းသည် အမွှေးလိုပင် အသားရေပေါ်တွင် သဘာဝအားဖြင့် ရှိနေကြသည်။ ပူနွေးပြီး စိုစွတ်သော နေရာတွင် ရှင်သန်ပေါက်ပွားပြီး အနီရောင်အကွက်များပေါ်ခြင်းဖြင့် အလွန်ယားယံခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။
Jock Itch (ပေါင်ခြံမှိုစွဲရောဂါ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
Jock itch သည် အဓိကအားဖြင့် ယောက်ျားများတွင်ဖြစ်သော အရေပြားတွင် ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ယောကျာ်းများ၏ ခန္ဓ္ဓါကိုယ်တည်ဆောက်ပုံကြောင့် ဖြစ်သည်။
Jock Itch (ပေါင်ခြံမှိုစွဲရောဂါ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ထိုအခြေအနေတွင် ပေါင်ခြံနှစ်ဘက်လုံးတွင် အနီ သို့မဟုတ် ပန်းရောင် အကွက်များပေါ်တတ်သည်။ ထိုနေရာတွင် အမြဲယားယံနေပြီး ပူနေနိုင်သည်။ အကွက်၏ အစွန်းဘက်တွင် အရည်ကြည်ဖုအသေးစားများပေါက်နေနိုင်ပြီး ထိုအရေပြားသည် အခွံများကွာကျပြီး၊ မွနေနိုင်သည်။
အနီကွက်သည် အရောင်ပြောင်းနိုင်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်း သို့မဟုတ် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလုပ်လျှင် ပိုဆိုးလာနိုင်သည်။ Hydrocortisone ခရင်မ်လိမ်းလျှင် မသက်သာပဲ ပိုဆိုးလာနိုင်သည်။
ရောဂါလက္ခဏာများသည် ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ဖြစ်နိုင်ပြီး၊ ကျန်းမာသောလူများတွင် မကုသပဲ အလိုလျောက်ပျောက်ကင်းသွားနိုင်သည်။
လူတစ်ယောက်သည် အရေပြားပေါ်တွင် အနီကွက်ပေါ်ပြီး နှစ်ပတ်အတွင်း မသက်သာလျှင်၊ ဆေးလိမ်းသော်လည်း မပျောက်လျှင် ဆေးသောက်ရန်လိုအပ်နိုင်သည်။
ထိုသို့်ဆေးသောက်သော်လည်း မသက်သာလျှင်၊ ဆရာဝန်နှင့် ထပ်မံပြသရန်လိုအပ်နိုင်သည်။
Jock Itch (ပေါင်ခြံမှိုစွဲရောဂါ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
Jock itch သည် dermatophyte ဟုခေါ်သော မှိုရောဂါတစ်မျိုးကြောင့် ဖြစ်ပွားသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ထိုမှိုရောဂါပိုးသည် အရေပြားပေါ်တွင် နေထိုင်ပြီး ရောဂါကို မဖြစ်စေပေ။ သို့သော် စိုစွတ်ခြင်း ကြာရှည်ဆက်ရှိနေလျှင်၊ ထိုနေရာတွင် ရောဂါပိုးများ ပေါက်ပွားသောကြောင့် ထိုနေရာတွင် ရောဂါဖြစ်နိုင်သည်။
Jock Itch (ပေါင်ခြံမှိုစွဲရောဂါ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
အဝလွန်သောလူများသည်အရေပြားအတွန့်အခေါက်များကြားတွင် မှိုရောဂါပိုးပေါက်ပွားနိုင်သောကြောင့် Jock itch ကို ပိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ စိုစွတ်ခြင်းနှင့် အဝတ်အထည်များဖြင့် ပွတ်တိုက်မှုများလျင်လည်း ထိုရောဂါဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ပေါင်ခြံ၊ ဂျိုင်းကြားနေရာများနှင့် အောက်ခံအဝတ်များဝတ်သော နေရာများကဲ့သို့ ချွေးထွက်တတ်သော နေရာများကို ဆပ်ပြာဖြင့် သေချာစွာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်သင့်သည်။ အခြားသော ရောဂါရှိသော လူများသည် မှိုရောဂါပိုဖြစ်နိုင်ပြီး Jock itch ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေများသည်။
ထိုရောဂါသည် အလွန်ကူးစက်လွယ်ပြီး ရောဂါပိုးရှိသော လူနှင့် ထိတွေ့မိသည့်အခါ၊ မလျော်ဖွပ်ရသေးသော အဝတ်အစားများ၊ သဘက်များကို ထိမိသည့်အခါတွင် ကူးစက်နိုင်သည်။
သင့်တွင် Athlete’s foot ကဲ့သို့သော မှိုစွဲရောဂါရှိလျှင်ပေါင်ခြံ သို့ ရောဂါပြန့်နှံ့နိုင်သောကြောင့် Jock itch ကို ဆက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
1. Jock itch. http://www.emedicinehealth.com/jock_itch/page2_em.htm. Accessed January 18, 2017.
2. Jock itch. http://www.medicinenet.com/jock_itch/page2.htm. Accessed January 18, 2017.
3. Jock itch. http://www.healthline.com/health/jock-itch#1. Accessed January 18, 2017.
4. Jock itch. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/jock-itch/symptoms-causes/dxc-20229532. Accessed January 18, 2017.
5. Jock itch. http://www.everydayhealth.com/jock-itch/guide/. Accessed January 18, 2017.
6. Jock itch – topic overview. http://www.webmd.com/men/tc/jock-itch-topic-overview#1. Accessed January 18, 2017.